यस्ता छन् योनी कसिलो बनाउने तरिका, सम्भोग गर्दा जीवनमै धेरै सुख प्राप्त हुन्छ - Setokalam.com
काठमाडौं । यौनसम्पर्क गर्दा धेरै कुरा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । महिला र पुरुषबीच हुने सम्पर्कमा दुबैले चरम सुख कसरी लिने भन्ने ध्यान केन्द्रीत रहन्छ । त्यसका पनि धेरै युवाहरुको जिज्ञासा भनेको योनी किन खुकुलो हुन्छ ? के कारणले खुकुलो हुन्छ अनि कसरी यसलाई कसिलो बनाउन सकिन्छ ? भन्ने हुन्छ ।
तपाईको यौनी खुकुलो नभईकन पनि श्रीमानले खुकुलो भएको भनेर तपाईलाई नराम्रो व्यवहार गर्नुभएको छ कि ? यदि यस्तो हो भने तपाई यौन सम्पर्कको बेलामा पुर्णतया यौनसम्पर्कको लागि तयारी भएर यौनसम्पर्क गर्नुभयो भने त्यो समस्या हट्नसक्छ । एजेन्सी